Tababbarka Android ee Horumarinta iyo Imtixaanka
Cusbooneysiin cusub oo horumarineed iyo tijaabo ah
Ku saabsan Android:
Android OS (nidaamka hawlgalka) waxaa sameeyay Google kaas oo loo isticmaalo 80% ee telefoonada casriga ah ee adduunka. Waxay micnaheedu tahay in ay jirto fursad cajiib ah Android horumariyaasha mustaqbalkooda soo socda. Haddii aan tixgelinno xaqiiqda ah in jiilka xiga ee dadka isticmaala Internetka (oo ah wax ka badan bilyan Million) ay internetka u heli karaan markii ugu horeysay ee ay ku helaan mobile. Horumarintu waa awooda lagu horumarinayo barnaamijyo ficil ah oo si fiican u qaabaysan oo ku habboon waxay ku siinayaan fursad aad ku fiicnaan kartid si aad ula xariirtid tirada dadka u soo jeeda shabakadooda gacanta ee internetka si ay u helaan wax macluumaad ah oo ku saabsan waxkasta inta lagu socdo socodka ama socodka ama baabuurka .
Nasiib wanaag dadka doonaya in ay bartaan horumarinta codsiyada Android, iyada oo loo marayo macaamilka inay u abuuraan kuwa abuura, waxaa jira fursado badan oo lagu raadinayo kuwaas oo samayn doona shaqo aad u fiican oo kaa caawinaysa inaad barato aasaaska barnaamijyada Android iyo Java. Waxa kale oo aad ogaan doontaa in aad bilowday koorso xiiso leh si aad u noqoto khibrad horumarineed oo Android ah.
Koorsada Tababarka Android waxaa loogu talagalay ardayda ku cusub new android waxayna rabaan inay bartaan sida ay u dhisaan barnaamijyada awoodda Android oo tijaabiya. Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan tababarka thisroid waa in aadan u baahan tahay xirfad khabiir ku codsan in aad iska diiwaan gelin kumbuyuutarka tababarka this. Haddii aad taqaanid sida loo isticmaalo taleefanka casriga ah si aad surfka internetka ugu dirtid ama u dirtid farshaxanada iyo u dir saaxiibadaada, Waxay noqon doontaa mid ku filan.
Barashada Waxyaabaha cusub Ma aha mid sahlan:
Sida aad ogtahay in barashada wax cusub ma aha mid sahlan haddii ay tahay horumarinta app Android / tijaabo ama sameynta sawirada adigoo isticmaalaya Photoshop ama CorelDraw. Waa inaad haysataa xishood iyo sidoo kale jaceyl si aad u barato wax cusub oo ka dibna u dhaqaaqo si ay u gaaraan khabiir. Koorsooyinka Tababbarka Tababarada iyo Tababarada Tababarrada Android ayaa ku caawin doona inaad ku socoto geeddi-socodka sameynta barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android-ga oo saameyn ku leh xuduudaha qaabka iyo shaqada.
Doorashada Machadka Tababarka ugu Fiican:
Dhamaadka koorsada Tababbarka Android, waxaad yeelan doontaa aqoon ku filan oo aad ku kobcin karto iyo tijaabinta barnaamijyo sahlan laakiin awood leh oo aad la wadaagi karto dadka aad taqaan. Aad bay muhiim u tahay in la doorto bixiyaha tababarka si macquul ah tan iyo markii loo fasaxay Machadyada Waxbarashada ee IT, sida Solutions Technologies Innovative, ayaa leh khibrad u baahan aqoonta iyo aqoontu waxay ku siineysaa adiga.
Red Hat OpenStack Administration (CL210) Tababarka Guriga